သတိသမ္အောက်မေ့ Be: drug-free doesn't mean side-effect free - သတင်း Rule
သတိသမ္အောက်မေ့ Be: မူးယစ်အခမဲ့အခမဲ့ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုမဆိုလိုပေ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “သတိသမ္အောက်မေ့ Be: မူးယစ်အခမဲ့အခမဲ့ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုမဆိုလိုပေ” ဖိလိပ္ပု Hoggart ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 21 မေလအပေါ်များအတွက် 2015 06.10 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အကြှနျုပျ၏နံနက်ဆေးပြားငါအာဟာရကြွယ်ဝဆီးအောင် မှလွဲ. အသုံးဖြစ်ပါသည်သေချာပါတယ်သော multivitamin ထားရှိရေး, ငါ့ကိုအမင်္ဂလာရှိ၏အောင်၏ကံဆိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်နိုင်သည့်စိတ်မကျဆေး Antidepressants, အဘယ်သူ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသူတို့ကိုအတွက်စကားလုံး "necrosis" နဲ့တစ်ဦးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအရေအတွက်ပါဝင်တဲ့စိတ်ဓါတ်များ stabilizer. ငါနေ့တိုင်းသူတို့ကိုမျို, ဖြစ်နိုင်သည်လျော့နည်းစေ့စေ့ငါသင့်ထက်, ငါ OK ကိုလုပ်နေတာပေါ့ခန့်မှန်း. ငါမရှိတော့အရက်သို့အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြောင်းတလျှောက် skittering တာပါ, ငါသတ်သေ၏အကျိုးကျေးဇူးများအိပ်ပျော်သည်သို့မဟုတ်တက်အလေးချိန်ဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမဖြုန်းပါနဲ့. တခါတရံငါပင်ငါအနာဂတ်အချို့ကိုကြင်နာရှိသည်နှင့်ငါမကွာခဏပျော်ပါတယ်ဆိုသကဲ့သို့ငါထိုနည်းတူဝေးသွားချင်ပါတယ်ယုံကြည်. ငါဆဲတစ်ခါတစ်ရံတွင်ညဉ့်အခါနိုး, မှောင်မိုက်သို့အော်ဟစ်, ဒါပေမယ့်ငါကအသက်တာ၏လူအများစုရဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်ပဲတက်ကြွစွာဥပစာရဲ့သံသယ. ဒါနဲ့ဆေး OK ကိုလုပ်နေကြမှန်း.
ငါဆိုသည်ကားအဖြစ်, ထိုစိတ်မကျဆေး Antidepressants အခါသမယပေါ်မှာငါ့ကိုအနည်းငယ်လည်းပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ် – သို့မဟုတ်အစား, hypomanic, မင်္ဂလာစေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းအမျက်ထွက်စေနိုင်ပါတယ်, ရန်ငြိုးထားသောအနက်ရောင်. ကြှနျုပျတို့သညျဤအကွောငျးဆှေးနှေးအကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံးစိတ်ရောဂါတိုင်ပင်ဆွေးနွေး, ဆင်းသည်ငါ့ဆေးထိုးဆောင်ခဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြ, နောက်ဆုံးမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပ်တန့်. ဘယ်သူမှမူးယစ်ဆေးဝါးများယူမှလိုလား. Manic နှင့် hypomanic ပြည်နယ်များဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောကောင်းသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်နှင့် – အပြင် – သူတို့ကျိန်းသေငါ့အသက်ကိုရန်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေ. ကျနော်တို့စိတ်ဓါတ်များ stabilizer အကြောင်းပြောဆို, ဆေးထိုးအတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုတိုးလာ? ကျနော်တို့ငါ၏အသွေးတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒီကိစ္စကိုဘာမှမဖြစ်ပျက်နေသည်သေချာအောင် – ဥပမာ "မာလ်တီကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုစနစ်အားရှုံးနိမ်", သောအကြှနျုပျကို Windows Vista ကတစ်အတော်လေးယုန်ကလေးမိတ္တူကဲ့သို့မြည်စေသည်. ကျနော်တို့အခြားရွေးချယ်စရာမှတဆင့် run – အကြံပေးခြင်း? Group မှကုထုံး? သူမ "သတိသမ္ဖော်ပြထားအဖြစ်သူမလုနီးပါး sheepish ကြည့်? ဒါဟာ "ယခုအချိန်တွင်အရာအတွက်င်.
ဒါဟာအမှန်တကယ်ထဲမှာအရာဖြစ်ပါသည်; အ NHS အားဖြင့်ရာထူးတိုး နှင့်မိသားစုဆရာဝန်ခွဲစိတ်မှာ, နှင့်ဘာသာရပ် များပြားသော သတင်းစာ အပိုင်းပိုင်း, သတိသမ္-based သိမြင်မှုဆိုင်ရာကုထုံးအများအပြားအလားအလာစိတ်ရောဂါကုသမှု၏ကံကြမ္မာခံစားနေရပြီး – ဖောင်းပွခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာကျော်. ဗုဒ္ဓဘာသာအလေ့အကျင့်တစ်ခု sliver အပေါ် အခြေခံ. – အထူးသဖြင့်ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာအလေ့အကျင့် – MBCT detach လုပ်လိုက်သောလေ့လာရေး၏ဝိညာဉျတိုးမြှင့်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာနှစ်ခုစလုံးပေးသွားနိုင်ရန်ကြိုးစား. ဒီတရားအားထုတ်မှတဆင့်သို့မဟုတ် 'ယခုအချိန်တွင်အတွက်ဖြစ်ခြင်း' '၏လျော့နည်းပြင်းထန်သောလေ့အကျင့်အားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်; တစ်ဦးချင်းစီ incipient စိတ်ဓါတ်များပြတ်တောက်ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်လာနှင့်ဇောက်ချပါဝင်လာအတွက်ဖမ်းမိသွားရှောငျနိုငျ, Self-အားဖြည့်စိတ်ဓါတ်များသံသရာ. အဆိုပါကုထုံးတစ်ခုလျောက်ပတ်သော evidential အခြေစိုက်စခန်းရှိပြီးငါကအတူအကြိမ်အနည်းငယ်ပါဝင်နေပါတယ်, ငါသည်ငါ့အကျိုးအတွက်မှယုံကြည်. ဒီတော့ MBCT လုံးဝ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တန်ရာအပေါ်ကျော်ကြားမှုမှသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖွင့်, ဒါပေမယ့် '' သဘာဝ '' ဒါကြောင့်စိတ်ရောဂါဆေးနှင့်အမှုအရာ fix တစ်ဦးအလိုဆန္ဒနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုအအီဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်အသံသယကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ခဲယဉ်းင်.
ဒီအီမိုမက – ဒါကြောင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများများစာရင်းကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲငါ့ဦးခေါင်းထွက်အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲပြီးချနိုင်မှကောင်းတဲ့ဖြစ်ချင်ပါတယ်. သို့သော် "သဘာဝ" သောအရာတို့ကိုပြုပြင်တာတွေမရှိမလိုချင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိလိမ့်မည်မျှအာမခံချက်ဖြစ်ပါသည် – ကစိန့် Johns Wort ထွက်လှည့်, ပျော့စိတ်ကျရောဂါသည်အဖြစ်နိုင်သည်အသုံးဝင်သောသော, နှငျ့ပတျသကျသောအချို့သောအကုန်လုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည် တားဆေးမူးယစ်ဆေးပြတ်တောက်. သို့သော်ဧကန်အမှန်အတရားအားထုတ်ကွဲပြားခြားနားသည်? အေးဆေးနှင့်ရိုးရိုးလေ့လာအကြံအစည်ထိုင်ရင်းခဲမှုစနစ်ပျက်ကွက်ပတျသကျဘာမှဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ့်, ဟုတ်လား?
MBCT စိတ်ကျရောဂါကုသရည်ရွယ်ဘယ်တော့မှခဲ့သည် – အနည်းဆုံး, မချက်ချင်း. သူတို့အကြံစောငျ့ရှောကျဖို့စိတျဓာတျတစ်ဦးချင်းစီကိုတောင်းယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကျရတဲ့သူတို့ကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့အသိအမှတ်ပြု, သတိသမ္အစားတစ်ဦး prophylactic အဖြစ်ရည်ရွယ်သည်. တရားအားထုတ်ရန်နှင့် "ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်း" သင်စိတ်ကျရောဂါကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ဖြေရှင်းနိုင်မ. သို့သော်, MBCT ပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်အဖြစ်, ဒီမကြာခဏမေ့လျော့နေသည်. ကျွန်တော်တို့ကိုလူနာကမကြာခဏကအမြန်ပျောက်ကင်းအားလုံးအဖြစ်ကိုကမ်းလှမ်းခံရကြောင်းထင်ရနိုင်; ကပ်မထားဘူးသောအတားအဆီး ထောင်. အင်္ဂတေ. Charlotte Walker က, အဖြစ်ဘလော့ဂါသူတစ်ဦးစိတ်ကျန်းမာရေးထောက်ခံသူ စိတ်ကြွဘလော့ဂါ, ငါကလူဟုန်ထမ်းကြားရကြပြီ "ငါ့ကိုကိုပြောတယ်, မကြာခဏအကျပ်အတည်းအတွက်, "သင်သတိကြိုးစားခဲ့ဖူး?"ကလုံးဝ Uncomplicated ရဲ့တူ… ထိုဝန်ထမ်းတဦးကယ့်ကိုသူတို့က "အကြောင်းပြောနေတာဘာနားမလညျပါဘူး. ထိုကဲ့သို့သော MBCT အဖြစ်မူအကျင့်ချဉ်းကပ်တက်တက်ကြွကြွနှင့်အတူစေ့စပ်ခံရဖို့လိုအပ်, တစ်အလှနျစိတျဓာတျတစ်ဦးချင်းရိုးရိုးမပွုနိုငျတစ်ခုခု.
နောက်ထပ်, ဒါကြောင့်အားလုံးမဟုတ်ဘာဝနာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏သေချာပေါက်ညင်သာပျော့ပျောင်းဖြစ်ကြောင်း ပို. ပို. သိသာလာ, ထိုသို့အကောင်းတစ်ဦးအရာ၏အလွန်အကျွံရှိသည်ဖို့အမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း; တရားအားထုတ်တခါတရံ depersonalisation သို့မဟုတ် derealisation ၏ခံစားခကျြကိုသတင်းပို့, ကိုယ်ပိုင်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ထူးဆန်းအပေါ်ယူအဖြစ်, အတုသို့မဟုတ်ဆန္ဒပြနေအရည်အသွေးပြည့်. ငါရစေရန်ဒီကြုံတွေ့ဖူးတဲ့, အစိတ်ကြွတစ်ဦးလက္ခဏာအဖြစ်; ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အာရုံပျက်ဖြစ်ပါတယ်နာကျင်မဟုတ်စဉ်. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်တစ်ဦးချင်းစီမှထိုကဲ့သို့သောကုသလျှောက်ထား – ပင်သူတို့အားအဘယ်သူ၏ရောဂါလက္ခဏာလွှတ်၌ရှိကြ၏ – အသစ်တစ်ခုကိုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုဆေးညွှန်းအဖြစ်သတိပြုဖို့လို၏တူညီသောဒီဂရီနှင့်အတူချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ်.
အကြှနျုပျ၏စိတ်ရောဂါအပေါ်ရွှေ့ဖို့အကြောင်းခဲ့သည် – လာမည့်ရက်ချိန်းနေ့စွဲ, သွေးစစ်ပုံစံကို, လိပ်စာကအသေးစိတ်စစ်ဆေး – ငါသတိဖို့သဘောတူကြသောအခါ. ဒါဟာ "အရာ၌" အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်နိုင်ဖောင်းပွခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောနှင့်ယခုတန်ပြန်၏စခံစားနေရပြီးကျော်ကျော်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ bathwater နှင့်အတူဗုဒ္ဓထွက်ပစ်မထားသင့်. သတိတရားအားထုတ်ခြင်း၏တသမတ်တည်းဖော်ပြခဲ့သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများငါ့ကိုကုသမှုမျှမ placebo ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုပေး. Walker ကလည်း၎င်း၏ထောင့်ကိုတိုက်ဖို့ဆန္ဒရှိသည် – တစ်ဦးအလားအလာထိရောက်သောကုသမှုကိုဆင်းရဲသောသူသည်ပညာရေးနှင့်မသင့်လျော်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုအားတန်ပြန်ကျေးဇူးတင်စကားခံစားနေရပြီးကြောင်းသူမ၏စိတ်ပျက်ငါ့ကိုပြောပြ. ထိုအခါပိုပြီးစိုးရိမ်စရာသက်ရောက်မှုများ – depersonalisation, အလန့်တကြားဖြစ်ခြင်း – တစ်ဦးဆေးထိုးတုန့်ပြန်ကွေးအတိုင်းလိုက်နာဟန်, အထူးကြပ်မတ်ဘာဝနာကနေဖြစ်ပေါ်လာ. ငါ၏အစိတ်ဓါတ်များ stabilizer နှင့်ဝသကဲ့သို့အများကြီး, ဒါကြောင့်အနိမ့်ကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ထိုသို့ညာဘက်ခံစားရလျှင်တိုးမြှင့်; စနစ်ကပျက်ကွက်ထွက်သည်စောင့်ကြည့်ဖို့.
တစ်ဦးကနှစ်ရှည်စကားစစ်ထိုးပွဲ – မကြာသေးမီကစင်ပေါ်ပြန်တင်လိုက်ခြင်းသောတဦးတည်း – ထိုဖြစ်ပါတယ် စိတ်ရောဂါမမှန်ဘို့ pharmacological ကုသမှု၏ညျသငျ့လျြော, သူတို့ရဲ့လူသိများဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအားပေး. ဒါဟာအရေးပါတဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစကားပြောဆိုမှုသည်နှင့်ဤမေးခွန်းများကိုအားလုံးမမှန်အပေါင်းတို့နှင့်မူးယစ်ဆေးရန်လျှောက်ထား – ဒါပေမယ့်စိတ်ကျန်းမာရေးမကြာခဏထွက်ဒေါ်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြထားပါတယ်ခံရဖို့ပုံရသည်. ကျနော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာဤဒိုမိန်းအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍနိုငျကွောငျးကိုသိသကဲ့သို့သွေးဖိအားသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါအဘို့အဆေးပြားယူရန်အဘို့အပျော်ရွှင်ကြတယ်. ပြောင်းပြန်, စိတ်ကျရောဂါသည်အ, OCD နှင့်ပင်အပါအဝငျက, လူ့အဖွဲ့အစည်းအသုံးပြုတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများဆီသို့တက်တက်ကြွကြွရန်လိုထင်ရနိုင်, ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းဤသူမမှန်မသာ debilitating ရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သေစေနိုင်သော. အားလုံးထိရောက်သောကုသမှု – အားလုံး - ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်လိမ့်မယ်, နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေတဲ့အခမဲ့ pass ပေးထားမဖြစ်သင့်. ငါသည်ငါ့ဆေးပြားမျိုမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ငါ့စိတ်ရောဂါနှင့်အတူစကားပြောမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏ကုသစောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ငါ့ကိုထိခိုက်မှုနိမိတ်လက္ခဏာများလုပ်နေလုပ်နေ.
ဖိလိပ္ပု Hoggart တွစ်တာအဖြစ်ပေါ် @anandamide
25952	0 အပိုဒ်, ဦးနှောက်ကို flapping, မှတ်ချက်, ကျန်းမာခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ္ပညာ, သိပ္ပံ, သိပ္ပံနှင့်သံသယ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို
← ဦးနှောက်ကို implants စက်ရုပ်လက်မောင်းကိုထိန်းချုပ် – အတွေး၏တန်ခိုးနှင့်အတူ အီတလီမှာပေါ့ပ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းအမိန့်ကတော့ Uber →